बुधबार, २७ कार्तिक २०७६, ०५ : २१
शुक्रवार कभर स्टोरी : सेक्स क्यालेन्डर
गर्भ राख्दा नै छोरा वा छोरी निश्चित गर्न प्राचीन कालदेखि विविध सिद्धान्त प्रचलित छन् । अहिले पनि छोरा जन्माउन हरिवंश पुराण लगाउनेदेखि ज्योतिष परामर्श लिनेको संख्या कम छैन । पछिल्ला समय वैज्ञानिक खोज पनि निकै भएका छन् । गर्भको लिङग निर्धारणमा विज्ञान र ज्योतिष कहाँनेर ठीक र कहाँनेर गलत छन् ? उपेन्द्र खड्काको लेखाजोखा :
एक घटना, चार बयान
चार जनाले मैले लगाएको कपडा खोले र भिडियो खिचे । कोठामा रहेको म्याट्रेसमा सुताएर विकास र शैलेशले सेक्स गरे । बेलुका फेरि रवि र दीपक आएर सेक्स गरे । म बेहोस भएँ ।
कमलादीस्थित होटल ल्यान्डमार्कमा माघ ७ गते भएको घटना बलात्कार हो या मोलमोलाईको हतियार ? घटनाको भित्री तहसम्म पुगेर तयार पारिएको विशेष सामग्रीः
हिजो प्रियंका उनकी ‘दिदी’ थिइन्, आज ‘प्रेमिका’ भएकी छन् । आयुष्मान खुशी छन् । होइन, दुवै खुशी छन् । स्कुलकी ‘सिनियर दिदी’लाई ‘फ्यूचर वाइफ’ बनाउने सपना आयुष्मानले बुनिसकेका छन् । बजारमा छताछुल्लै छ उनीहरुको प्रेम कहानी ।
क्रिकेटर पृथुको हिरासतका २३ दिन
मार्समेलो डिजे काण्डमा प्रहरी हिरासतमा खेपेका क्रिकेटका राष्ट्रिय खेलाडी पृथु बास्कोटाको २३ दिन प्रहरी हिरासतमा बित्यो । ब्याट बोक्ने हातमा हत्कडी लाग्दा उनले कस्तो अनुभूत गरे ? हिरासतपछि उनमा केही परिवर्तन आए ? उनका गुनासा छन् ? खेलाडी छँदै व्यापारमा हात हाल्दा केही पछुतो पो छ कि ? उनले केपी ढुंगाना र स्मृति ढुंगानासँग साटेको हिरासत अनुभव ।
मनोज-मीना ट्रयाजेडी : करोडको डिभोर्स
प्रेम र विवाह मान्छेका नितान्त व्यक्तिगत मामिला भए पनि मनोज–मीनाको ‘ट्रयाजेडी’ बहसको विषय बनिरहेको छ । चिया पसलदेखि रक्सी भट्टीसम्म यी दुवैको दुखद् कहानीको खासखुस सुनिन्छ । डिभोर्सको कारक र कारणबारे मीना आक्रामक रुपमा मिडियासँग खुलेकी छन् भने मनोज मौन नबसे पनि डिफेन्सिभ देखिन्छन् ।
नेपालमा टिन्डर ट्रेन्ड: डेटिङको बहानामा सेक्सको खोजी
हिजोआज न्यास्रो मेट्न सामाजिक सञ्जाल नै काफी छन् । उमेरदारले पार्टनर खोज्न मेला धाउनबाट मुक्ति पाएको वर्षौं भइसक्यो । हुँदाहुँदा अब मनसँगै तनको प्यास मेटाउनसमेत सामाजिक सञ्जाल सारथि बनिरहेका छन् ।
चर्चामा आउने अनेक काइदा : बडिगार्डदेखि बिकिनीसम्म
फिल्मकर्मीले चर्चा खोज्नु कुनै नौलो कुरो होइन । तर चर्चा चलाउनैका लागि नेपाली फिल्मकर्मीले जे उटपट्याङ हर्कत गरिरहेका छन्, त्यो उदेक मात्र होइन, वाहियातै देखिन थालेको छ । उनीहरु बडिगार्ड र बिकिनीलाई प्रचारको बलियो अस्त्र ठानिरहेका छन् । आफ्नो सिर्जनाको गहनतामा भन्दा क्षणिक चर्चामा जोड दिइरहेका छन् ।
गोप्य अंग ताक्दै ट्याटु
स्वअभिव्यक्तिको सुन्दर माध्यमका रुपमा लिइने ट्याटुको क्रेज नेपालमा प्रतिदिन बढिरहेको छ । आफ्नै शरीरलाई कलाको क्यानभास बनाइने ट्याटु–क्रेज आश्चर्यलाग्दो गरी बढ्दै छ । नेपालमा ट्याटु देखिने अंगमा खोप्ने मात्र होइन, शरीरको गोप्य भागमा अंकण गर्ने प्रचलन पनि उत्तिकै छ । विशेषगरी युवतीहरुले गोप्य भागमा विभिन्न डिजाइनका ट्याटु खोपिरहेका छन् ।
यौनकर्मीको सदाबहार स्पट
भनिरहनु नपर्ला, राजधानीको परिचित र व्यस्त ठाउँ हो– रत्नपार्क । पार्कको नाम फेरिएको धेरै भइसक्यो तर यसको चरित्र अझै उस्तै छ । पहिले पार्कभित्र हुने ‘सेक्स डिल’ अहिले ‘बाहिरै’ भइरहेको हुन्छ । रत्नपार्क क्षेत्र अहिले ‘सदाबहार सेक्स स्पट’का रुपमा परिचित हुँदैछ । यसको बदनाम चरित्रका कारण त्यहाँ ओहोरदोहोर गर्ने सर्वसाधारणले समेत सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ । उपेन्द्र खड्गा र पुष्पा थपलियाले रत्नपार्क क्षेत्रमा हुने विभिन्न तमासा नियालेर तयार पारेको रिपोर्ट ।
नेपालमा कामै पाइँदैन भनेर गुनासो गर्नेहरुलाई लोप्य्राउने बेला आइसकेको छ । अहिले नै विदेशमा जस्तो काम गरिन्छ, त्यस्तै कामका लागि अढाई लाखभन्दा बढी कामदारको आवश्यकता चर्केर गएको छ । कतिसम्म भने नेपालमा काम गर्नेहरु नपाइएपछि विदेश (भारत होइन)बाट समेत कामदार आयात गर्न थालिएको छ । आखिरमा नेपालमा कस्ता कामदार चाहिएको छ ? किन चर्कियो कामदारको अभाव ? शुक्रवारकर्मी रुद्र खड्काको खोजी ।
मिस र मिस्टरको धन्दा
हप्तैपिच्छे बजारमा नयाँ–नयाँ सुन्दरी र ह्यान्डसम जन्मिइरहेका छन् । राजधानीसहित देशका मुख्य सहरहरुमा ‘मिस’ र ‘मिस्टर’को धन्दा खुब फस्टाइरहेको छ । सुन्दरताको नापतौल गर्ने बहानामा आयोजकहरुले प्रतिस्पर्धीको खल्ती रित्याउँदैछन्, आफ्नो भर्दैछन् । यतिसम्म कि विजेताले घोषणा गरिएका पुरस्कारसमेत पाउँदैनन् ।
घट्दो युद्ध, बढ्दो सुविधा र सुस्ताएको लाहुर–भर्तीविरोधी स्वरसँगै लाहुरे हुने चाहना बोक्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । हरेक वर्ष २० हजारभन्दा बढी नेपाली युवा बेलायती सेना तथा सिंगापुरे पुलिसका लागि हत्ते हाल्दा मुस्किलले दुई सय १० जनाको भाग्य चम्कन्छ । आठ महिना लामो प्रशिक्षण र चर्को प्रतिस्पर्धाभित्रको कथा कस्तो छ ? आखिर किन हजारौँ नेपाली लाहुरे हुन मरिहत्ते गरिरहेका छन् ? किन घट्दैन ‘भर्तीको लाइन’ ?
काेरियामा किन बढ्दैछ नेपालीकाे अात्महत्या ?
अन्य मुलुकभन्दा ६ गुणा बढी अर्थात् ६ लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक पाउने लोभमा कामको प्रकृति र आफ्नो प्रवृत्ति नबुझी कोरिया जाने नेपाली युवाहरु आत्महत्या रोज्न थालेका छन् । पछिल्लो समय मात्र १७ जनाको मृत्युमध्ये चार जनाले आत्महत्या गरेको खबरले कोरियाली सरकार तर्सिएको मात्र छैन, नेपाल सरकारलाई विशेष नीति नै बनाउन घच्घच्याइरहेको छ ।
राजनीतिमा कलाकार : पार्टीका ‘गहना’ मात्रै?
जब–जब चुनाव आउँछ, कलाकारले टिकट पाउने हल्ला बजारमा खुब चल्छ तर पाउने भने अर्कै हुन्छ । यसपाला पनि ‘देशका गहना’ मानिने कलाकारले टिकट पाउने हल्ला हल्लामै सीमित रह्यो । राजनीतिक दलहरुले कलाकारलाई किन पार्टीका ‘गहना’मै सीमित राखिरहेका छन् ? आखिर किन कलाकारलाई राष्ट्रका गहना भनेर फुस्ल्याउँदै लोप्पा खुवाइरहेका छन् ?
काठमाडौंका डिस्को: केटालाई फी केटीलाई फ्री
राजधानीका डिस्को र नाइट क्लबहरुमा ‘क्राउड’ बढाउने बलियो हतियार बनेका छन्– युवतीहरु । त्यहाँको दृश्य देख्दा यस्तो लाग्छ, क्लब सञ्चालकहरुको ‘बिजनेस पोलिसी’ नै हो– केटालाई ‘फी’, केटीलाई ‘फ्री’ । बुधबार त ‘लेडिज नाइट’ का रुपमा युवतीलाई विशेष सुविधा नै दिइन्छ ।
युवावस्था विशेष अवस्था हो । यो तन्नेरी काल नयाँ नयाँ अनुभव लिने मात्र नभई आफ्नो नयाँ सर्कल बनाउने अवसरको रुपमा धेरैले लिन्छन् । कलेज पढ्ने, करियर सुरु गर्ने, घुमघाम गर्ने मात्र नभई नयाँ नयाँ लत सुरु पनि यस्तै समयमा हुन्छ ।
चिहानको चर्को समस्या
मानिस नचाहेर जन्मन्छ, नचाहेरै मर्छ । नचाहँदा–नचाहँदै भएको कामले अहिले सोच्नै नसकिने गरी नयाँ झन्झट थपेको छ– कहाँ गाड्ने ? मरेपछि गाड्ने ठाउँको अभाव चर्किएपछि विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायमा नयाँ–नयाँ चलन चल्न थालेको छ । क्रिस्चियन (नेपाली भाषामा ख्रिस्चियन) धर्मावलम्बीले समेत जलाउन थालेका छन् ।
‘यो गाडी काँ जाने खलाँसिनी ?’
चोर्नु, ढाँट्नु पो हुँदैन त काम गरी खान के को लाज ? हिजोआज यस्तै आहान प्रशस्त सुन्न पाइन्छ । समाज परिवर्तनको यो एउटा गतिलो उदाहरण हो । त्यस्तो उदाहरण त अचेल सबैभन्दा बढी चक्रपथमा गुड्ने कैयौँ मिनीबस र बसहरुमा देख्न सकिन्छ ।